အရက်မူးပြီး ကားမောင်းခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံလာဘ်ထိုးခဲ့ကြောင်း ချွဲဂျေ? - Yangon Media Group
အရက်မူးပြီး ကားမောင်းခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံလာဘ်ထိုးခဲ့ကြောင်း ချွဲဂျေ?
ဆိုးလ်၊ ဧပြီ ၄
FTISLAND အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ချွဲဂျောင်ဟွန်းသည် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည့် အရက်မူးပြီး ကားမောင်းမှုကို ဖုံးကွယ်ရန် ရဲအရာရှိတစ်ဦးထံ လာဘ်ထိုးခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ဧပြီ ၄ ရက်တွင် ဆိုးလ်မြို့ပြရဲတပ်ဖွဲ့ အေဂျင်စီမှ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ချွဲ ဂျောင်ဟွန်းသည် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အရက်မူးပြီး ကားမောင်းခဲ့သည်ကို ဖမ်းမိခဲ့ချိန်၌ ”ကျွန်တော် ပိုက်ဆံပေးပါ့မယ်။ ဒါကြောင့် ဒါလေးကို ကျော်သွားပေးပါ”ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
ချွဲဂျောင်ဟွန်းသည် ယင်းအမှုကို ပြေလည်စေရန် ပထမဆုံး ဝမ် ၂ သန်း၊ ယင်းနောက် ဝမ် ၅ သန်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ဝမ် ၁ဝ သန်းအထိ တိုးပြီးပေးခဲ့သည်ကို ကြားခဲ့ရသည်ဟု ဂျောင်ဂျွန်ယောင်း၏ KakaoTalk စကားပြောခန်း၌ ပါဝင်သူအချို့ကဆိုသည်။ ၎င်း၏ အရက်သောက်ပြီး ကား မောင်းခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်ကို တာဝန်ယူခဲ့သူ ယုန်ဆန် ရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိက အဆိုတော်ချွဲသည် ၎င်းကို ဝမ် ၂ သန်း ကမ်းလှမ်းခဲ့ သော်လည်း ၎င်းက ငြင်းပယ်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြားထားသည်။
ယင်းအချိန်တွင် ချွဲဂျောင်ဟွန်းသည် သွေးတွင်းအယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု သုည ဒသမ ဝ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း တိုင်းတာတွေ့ရှိ ခဲ့ရသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ၎င်း၏လိုင်စင်ကို သိမ်း ခဲ့ပြီး ဝမ် ၂ ဒသမ ၅ သန်း ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော် လာဘ်ထိုးခဲ့မှုအတွက် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ယင်းဖြစ်ရပ်သည် မီဒီယာများအပေါ် မရောက်ရှိခဲ့ပေ။ ချွဲဂျောင်ဟွန်းသည် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ လာဘ်ထိုးမှု၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ညစ်ညမ်း ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူး၊ ဖြန့်ဝေမှုတို့ဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည်။
ရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်တွင် ထားရှိရန်အတွက် ရုပ်ရှင်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းနိ?
ဘယ်လ်ဂျီယံ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ချဲလ်ဆီးအသင်း ကွင်းလယ် ကစားသမား ဟာဇက် ဆွတ်ခူး
စစ်ကိုင်း ရတနာ စေတီဆင်များရှင် စေတီတော် အကြီးစားပြုပြင်ရာတွင် သီတဂူဆရာတော်မှ စိန်ဖူးတော် ??